Qarax gaari oo galabta ka dhacay Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Gaari Kaarib ahaa oo sida la sheegay lagu soo xiray walxaha qarxa, ayaa waxa uu galabta ku qarxay Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, waxaana la xaqiijiyay in hal nin uu ku dhintay.
Jugta qaraxa, ayaa waxaa laga maqlay inta u dhaxeyso xaafadda Towfiiq iyo Suuq Bacaad, xilli la tilmaamay in gaarigu uu ka yimid dhinaca Suuq Bacaad, kuna sii jeeday xaafadda Towfiiq.
Hal nin oo qura oo gaarigaasi saarnaa, ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu ku dhintay. Ninkaasi oo dadka reer Yaaqshiid ka mid ahaa, ayaa wax ka baranaayay Jaamacad ku taala Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Dowladda oo ku baxay halka uu qaraxu ka dhacay, ayaa waxay xireen wadada, waxayna hawlo baaris ah oo qaraxaasi ku saabsan ay ku sameeyen gaariga.
Saraakiisha Booliska & Nabad Suggida Gobolka Banaadir, ayaan wax war ihi ka soo saarin qaraxa gaari ee ninkasi dhalinyarada ah lagu dilay, walow ay soconayan baaritaanada dilkiisa.
Lama garanaayo waxa keenay dilka ninkaasi, sidoo kalana waxaan jirin cid sheegatay masuuliyadda dilkiisa. Laakiin falalka ceynkani oo kala ah, ayaa muddooyinkanba ku soo badanaayay Caasimadda